Waa Maxay Maareynta Tag Tag? Maxay Tahay Inaad U Hirgeliso Maareynta Tag? | Martech Zone
Tilmaamyada ay dadku u isticmaalaan waxsoosaarka ayaa wareersan. Haddii aad ka hadlaysid ku calaamadeynta barta wax lagu qoro, waxaad u jeeddaa inaad dooraneyso ereyo muhiim u ah maqaalka tag u fududee in la raadiyo lana helo. Maaraynta Tag waa farsamo iyo xallin gebi ahaanba ka duwan. Fikradayda, waxaan u maleynayaa in si liidata loo magacaabay… laakiin waxay noqotay ereyga guud ee warshadaha oo dhan sidaa darteed waan kuu sharixi doonnaa!
Waa maxay Tag Tag?
Tagitaanka goob ayaa ku darsanaysa xoogaa sumado qoraal ah madaxa, jirka, ama cagaha goob. Haddii aad waddo aagag gorfayn oo badan, adeegyo tijaabin, raad -raac beddelid, ama xitaa qaar ka mid ah nidaamyada nuxurka firfircoon ama bartilmaameedka ah, waxay had iyo jeer u baahan tahay inaad geliso qoraallada qaab -dhismeedka maareynta nuxurkaaga. Nidaamyada maareynta summada (TMS) waxay ku siinayaan hal qoraal si aad ugu gasho shaxankaaga ka dibna waxaad ku maareyn kartaa dhammaan kuwa kale adoo adeegsanaya madasha dhinac saddexaad. Nidaamka maareynta sumadda ayaa kuu oggolaanaya inaad dhisto weelasha halkaas oo aad si caqli-gal ah uga abaabuli karto sumadaha aad rabto inaad maamusho.
In an ganacsi abaabul, maaraynta tag waxay awood u siineysaa kooxda suuqgeynta, kooxda qaabeynta webka, kooxaha ka kooban iyo kooxaha IT-da inay si madax bannaan u wada shaqeeyaan. Natiijo ahaan, kooxda suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa geyn kara oo maamuli kara astaamaha iyaga oo aan saameyn ku yeelan waxyaabaha ay ka kooban yihiin ama kooxaha wax naqshadeeya… ama ay tahay inay codsi u diraan kooxaha IT-ga. Intaa waxaa sii dheer, aaladaha maaraynta sumadaha shirkaduhu waxay bixiyaan xisaabin, marin u helid, iyo rukhsado loo baahan yahay hawlgelinta xawaaraha oo yaree khataraha breaking goobta ama arjiga.
Hubso inaad aqriso boostadayada goobta dirista maaraynta sumadda ecommerce, oo leh liis ay ku qoran yihiin 100 tags oo muhiim ah si loo geeyo loona cabbiro isdhexgalka macaamiishaada iyo dhaqanka wax iibsiga.
Maxay Tahay In Meheraddaadu Adeegsato Nidaamka Maareynta Tag?
Waxaa jira sababo dhowr ah oo aad u rabto inaad ku darto a nidaamka maaraynta tag hawlgalladaada.
In an deegaanka ganacsiga halkaas oo borotokoolka, u hoggaansamida, iyo amniga ay ka ilaalinayaan suuqleyda inay qoraallo si fudud u geliyaan CMS-kooda. Codsiyada in lagu daro, wax laga beddelo, la cusbooneysiiyo ama laga saaro astaamaha qoraalka bogga ayaa dib u dhigi kara awoodda aad u leedahay inaad maamusho dadaalka suuqgeyntaada. Nidaamka maaraynta tag ayaa saxaya tan sababtoo ah waxaad u baahan tahay oo keliya inaad hal dhejis ka geliso nidaamka maareynta tag ka dibna aad u maamusho inta kale oo dhan nidaamkaas. Marnaba uma baahnid inaad codsi kale u dirto kooxdaada kaabayaasha dhaqaalaha!
Nidaamyada maaraynta taaga ayaa lagu xoojiyay guud ahaan shabakadaha gaarsiinta waxyaabaha taasi waa si dhakhso leh. Adiga oo hal codsi u sameeya adeegyadooda ka dibna ku dhejiya qoraallo ka socda boggaaga, waad yareyn kartaa waqtiyada xamuulka oo waxaad baabi'in kartaa suurtagalnimada in bartaadu ay barafoobi karto haddii adeegga uusan hoos u socon. Tani waxay kordhin doontaa labadaba qiimaha is-beddelka waxayna kaa caawin doontaa hagaajinta mashiinkaaga raadinta.
Nidaamyada maaraynta tag ayaa fursad u siinaya iska ilaali tagging nuqul, taasoo dhalisay cabirro sax ah oo ku saabsan dhammaan guryahaaga.
Nidaamyada maaraynta tag ayaa badanaa bixiya tilmaam oo guji isdhexgalka dhammaan xalalka aad ku calaamadeyneyso boggaaga. Looma baahna tanno nuqul ah iyo dhajin ah, kaliya gal oo awood xal kasta!
Nidaamyo badan oo lagu maamulo tag ayaa isbeddelay waxayna bixiyaan xalal adag imtixaan kala jaban, tijaabooyin A / B ah, tijaabooyin noocyo badan leh. Ma dooneysaa inaad ku tijaabiso cinwaan cusub ama sawir boggaaga ah si aad u aragto haddii ay kordhineyso kaqeybgalka ama qiimaha gujinaya? Horay u soco!
Nidaamyada maaraynta tag qaarkood ayaa xitaa bixiya gudbinta firfircoon ama bartilmaameed. Tusaale ahaan, waxaad u baahan kartaa inaad beddesho qibradaada barta haddii booqdehu yahay macaamil ka soo horjeedka rajada.
10 Faa’iidooyinka Maareynta Tag
Halkan waxaa ah xog -ururin guud oo weyn oo ku saabsan faa'iidooyinka ugu sarreeya ee 10 ee maareynta sumadda ee suuqgeeyayaasha dhijitaalka ah Nabler.
Nidaamyada Maareynta Tag Tag (TMS) Platform
Liiska soo socda ayaa ah xalka maareynta tag tag, Hubso inaad daawato fiidiyowyada qaar ka mid ah kuwan sharaxaad dheeri ah oo ku saabsan awoodaha maamul tag iyo nidaamyada maaraynta tag.
Daahfurka Madadaalada Khibradda Adobe - Isku dayga inaad maareyso macaamiisha dhinac dhigida ee dhamaan teknoolojiyada ku jira xayeysiintaada suuq geynta waxay la imaan kartaa caqabado. Nasiib wanaagse, Daahfurka Madbacadda Daahfurka waxaa lagu dhisay naqshad loo yaqaan 'API-first design', oo u oggolaanaysa qoraalka si otomaatig ah farsamooyin loo geeyo, daabacaadda qulqulka shaqada, xog ururinta iyo wadaagista, iyo inbadan. Marka hawlihii waqti-luminta ahaa ee la soo dhaafay, sida maareynta astaamaha websaydhka ama qaabeynta moobiilka SDK, waxay qaadataa waqti ka yar - adiga oo ku siinaya xakamaynta ugu badan iyo otomatiga.
Dhiiran - Ku maamul dhammaan sumadahaaga iibiyeyaasha iyo xogtaada adoo adeegsanaya hal aragti oo dareen leh, oo muujinaya in ka badan 1,100 isku-darka iibiyeyaasha gadaal. Mideynta iyo jaangoynta ilaha xogta kala-jaban ee teknoolojiyada iyo aaladaha si aad uga kaxeyso ROI-ka weyn teknolojiyadaada soo kordheysa iyada oo loo marayo hal maareeyaha taaga xogta
Maamulaha Google Tag - Google Tag Manager wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto ama cusbooneysiiso tags-kaaga iyo barnaamijyada mobilada, si fudud oo bilaash ah, markasta oo aad rabto, adigoon ku dhejinin IT-da
Tealium iQ - Tealium iQ waxay u saamaxdaa ururada inay xakameeyaan oo ay maareeyaan xogta macaamiishooda iyo iibiyaasha MarTech ee ku baahsan webka, mobilada, IoT, iyo aaladaha ku xiran. Ku qalabeysan yahay nidaam deegaan oo ka badan 1,300 isdhexgalka iibiyeyaasha gadaal oo lagu bixiyo tags iyo API, waxaad si fudud u hawlgalin kartaa oo u maamuli kartaa sumadaha iibiyaha, tijaabin kartaa tiknoolajiyada cusub, ugu dambayntiina waxaad la wareegi kartaa tiknoolajiyada suuqgeyntaada.
Tags: adobe khibrad daruuromadal khibradeed adobeadobe launchingmaareeyaha tagbefiirsashomaaraynta sumadda shirkaddamaamule tag tagmaareeyaha tag googlemaaraynta tagnaqshadaha maareynta tagnidaamka maaraynta tagtilium iqtms